Fanorenana valisoa | Fitiavana, firaisana ary ny Internet | Miala vetaveta
Ny bilaogy rehetra avy amin'ny The Reward Foundation
Lesona any an-tsekoly
No. 15 Fetin'ny mpifankatia 2022
Tsia. 14 Autumn 2021
Fanontana manokana Mey 2021
Tsia 12 Winter 2021
TRF ao amin'ny Press 2022
TRF ao amin'ny Press 2021
TRF amin'ny Podcasts
Miala amin'ny pôrnôgrafia
Fanampiana amin'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet/fampiasana olana
Vidéo Fanamarinana taona
Fitaovana fihaonambe fanamarinana taona 2020 Fitaovana
Torolàlana ho an'ny ray aman-dreny ratsy fanahy momba ny pôrnôgrafia amin'ny Internet.
Torohevitra 12 ho an'ny ray aman-dreny hiresaka amin'ny ankizy momba ny pôrnôgrafia
Fiarovana amin'ny Internet
14T Febroary 2022
Billie Eilish dia manome maso mainty ny indostrian'ny pôrnôgrafia
16 ny Desambra 2021
Simon Bailey: Ny pôrnôgrafia dia miteraka herisetra amin'ny vehivavy sy ny tovovavy
15 ny Desambra 2021
Fanolanana sy pôrnôgrafia
Zaza voasasa atidoha!
Tsindrio eto ho an'ny bolongana bebe kokoa
Ny Reward Foundation dia fifandraisana manao mpisava lalana sy fiantrana fanabeazana ara-nofo. Ny anarana dia avy amin'ny zava-misy fa ny rafitry ny valisoa ao amin'ny ati-doha dia tompon'andraikitra amin'ny firosoantsika mankany amin'ny fitiavana sy ny firaisana ary koa valisoa voajanahary hafa toy ny sakafo, ny zava-baovao ary ny fahazoana. Ny rafitry ny valisoa dia azo alaina amin'ny valisoa valisoa mahery toy ny rongony, alikaola, nikôtinina ary internet.
Ny Reward Foundation dia loharanom-baovao marim-pototra porofo momba ny fifandraisana amin'ny fitiavana sy ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana, fifandraisana, fahazoana ary andraikitra ara-dalàna.
Ny Royal College of General Practitioners dia nanaiky ny atrikasa fiofanana ho an'ny fahasalamana sy ireo matihanina hafa momba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet ara-tsaina ary fahasalamana ara-batana, ao anatin'izany ny tsy fahampian'ny firaisana ara-nofo. Ho fanohanana an'izany, ataonay ny fikarohana momba ny fitiavana, ny firaisana ara-nofo ary ny sary vetaveta amin'ny Internet azon'ny besinimaro hipetrahana. Jereo ny maimaim-poana lesona planina ho an'ny sekoly izay misy ankehitriny na amin'ity tranokala ity na amin'ny Tranonkala Times Educational Supplement, koa maimaim-poana. Jereo koa ny anay Torolàlana ho an'ny ray aman-dreny amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet. Saika tsy azo atao ny miresaka momba ny fitiavana sy ny firaisana ara-nofo ankehitriny raha tsy miaiky ny anjara asan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet. Misy fiantraikany amin'ny fanantenana sy fitondran-tena izany, indrindra eo amin'ireo tanora.
Research avy amin'ny British Board of Film Classification dia nahita fa any UK, ankizy 1.4 tapitrisa isam-bolana dia mijery sary vetaveta. Efatra ambin'ny folo taona no ho miakatra dia ny 60 isan-jaton'ny ankizy no nahita sary vetaveta voalohany tamin'ny Internet. Ny ankamaroany, 62 isan-jato, dia nilaza fa tafintohina tsy nahy izy ireo ary tsy nanantena hahita sary vetaveta. Ny ankamaroan'ny ray aman-dreny, 83 isanjato, dia maniry ny hahita ny fanamarinana taona ho an'ireo tranonkala manimba ireo. Ary 56 isan-jaton'ny zaza 11 ka hatramin'ny 13 taona no te-ho voaro amin'ny fitaovana mihoatra ny 18 taona amin'ny Internet.
Manoro hevitra an'io minitra 2 io ianao fanentanana toy ny primer. Raha mila fanazavana tsara momba ny vokatry ny pôrnôgrafia ao amin'ny ati-doha dia jereo ity Fitarihana 5 minitra avy amin'ny fanadihadiana amin'ny fahitalavitra. Izy io dia misy neurosurgeon, fikarohana avy amin'ny University of Cambridge ary ny fiainana niainan'ny tanora mpampiasa sasany.
Ireto misy tsotra vitsivitsy fanombantombanan-tena fanazaran-tena novolavolain'ny neuroscientista sy mpitsabo amin'ny fijerena raha misy fiantraikany aminao ny porno na misy olona akaiky anao.
Ny sary vetaveta amin'ny Internet dia tsy toy ny pôrnôn'ny taloha. Fampaherezana 'supernormal' io. Mety hisy fiatraikany amin'ny ati-doha amin'ny fomba hafa amin'ny kôkainina na heroinina rehefa mihinan-kanina matetika. Ny pôrnôgrafia dia tsy mety indrindra ho an'ireo ankizy mandrafitra ny 20-30% amin'ireo mpampiasa amin'ny tranokalan'ny olon-dehibe. Io irery no manamarina ny lalàna fanamarinana taona nataon'ny governemanta UK hamerana ny fidiran'ny ankizy sy hiarovana ny fahasalaman'izy ireo.
Ny zaza mbola kely ka fito taona dia tratran'ny pôrnôgrafia mavesatra noho ny tsy fahampian'ny fanaraha-maso mahomby fikarohana nomen'ny Birao Anglisy momba ny sarimihetsika anglisy. Ny pôrnôgrafia dia atao hahazoana tombony, orinasa indostolo miliara dolara. Tsy atao hampianarana ny ankizy momba ny firaisana sy ny fifandraisana.
Fanandramana ara-tsosialy lehibe indrindra
Tsy mbola nisy teo amin'ny tantara hatramin'izay ny fananana firaisana ara-nofo mampihetsi-po be dia be toy ny ankehitriny. Io no fanandramana ara-tsosialy lehibe indrindra sy tsy voafehy amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona. Tany aloha dia sarotra ny miditra sary vetaveta. Avy amin'ny fivarotana olon-dehibe manana fahazoan-dàlana izay tsy mandrara ny fidiran'ny olona latsaky ny 18 taona izao. Ankehitriny, ny ankamaroan'ny sary vetaveta dia azo maimaim-poana amin'ny alàlan'ny finday avo lenta sy takelaka. Tsy hita ny fanamarinana taona mahomby ho an'ny mpitsidika. Ny fampiasana tafahoatra dia mamokatra a isan-karazany of ara-tsaina ary ara-batana olana ara-pahasalamana toy ny tebiteby ara-tsosialy, fahakiviana, tsy fetezana ara-nofo ary fiankinan-doha amin'ny anarana vitsivitsy. Izany dia mitranga amin'ny sokajin-taona rehetra.
Mampiseho ny fikarohana fa ny fihenan-tsasatra amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia mety hampihena ny fahalianana, sy ny fahafaham-po amin'ny fifandraisana amin'ny firaisana ara-nofo. Ny fitomboan'ny isan'ny tovolahy ka hatramin'ny antonony dia tsy afaka manao firaisana amin'ny sakaizan'izy ireo. Mihombo ny herisetra sy ny herisetra ataon'ny tanora amin'ny resaka firaisana ara-nofo ihany koa.
Ny tanjonay dia ny hanampy ireo olon-dehibe sy ny matihanina hiditra amin'ny porofo ilainy fa mahatoky tena izy ireo handray andraikitra mifanaraka amin'ny fanampiana ireo marary, mpanjifany ary ireo zanany. vonjimaika ny fanafoanana ny filokana, na ny fampihenana ny fahaizan'ny olona iray, dia ny fahasitranana amin'ny fiankinan-doha sy ny olana ara-nofo vokatry ny filan'ny nofo - tsy misy zavatra hafa. Ny Reward Foundation dia tsy miaro ny tsy fifadian-kanina ho fomba fiaina maharitra.
Pôrnôn'ny Internet 'tanjaka indostrialy'
Ny fikatsahana pôrnôgrafia dia misy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamana ara-pananahana, ny toe-tsaina, ny fitondran-tena, ny fifandraisana, ny fanatanterahana, ny vokatra ary ny heloka bevava. Satria raha mbola mihamitombo ny mpampiasa iray dia miova ny fiovan'ny atidoha ary mihodina mihodina. Ny fampiasana indraindray dia tsy azo inoana fa hiteraka fahavoazana maharitra. Ny fiovan'ny atidoha mahomby dia voarakitra amin'ny fampiasana ny pôrnôgrafia mandritra ny 3 ora isan-kerinandro.
Ny atidohantsika dia tsy nihetsi-po hiatrehana ny fanoherana ny hyper-stimulation be loatra. Ny ankizy dia marefo indrindra amin'ny famatsiana tsy misy farany momba ny sary vetaveta amin'ny Internet sy maimaimpoana. Izany dia noho ny fiantraikany mahery vaika amin'ny atidohan'izy ireo saro-pady amin'ny ambaratonga lehibe amin'ny fampandrosoana sy ny fianarana ara-tsaina.
Ny ankamaroan'ny sary vetaveta amin'ny Internet amin'izao fotoana izao dia tsy modely amin'ny firaisana ara-nofo sy fahatokisana, fa ny firaisana ara-nofo, ny famoretana ary herisetra, indrindra amin'ny vehivavy sy ny foko vitsy an'isa. Ny ankizy dia mandrindra ny herin'izy ireo mba mila zava-baovao tsy miovaova sy avo lenta amin'ny fahitana izay tsy afaka mifaninana ny tena mpiara-miasa. Manofana azy ireo ho voyeurs koa izy ireo.
Mandritra izany fotoana izany dia maro no mahatsapa ny tsy fahampian'ny firaisana ara-nofo ary tsy mahavita mianatra ireo interpersonal ilain'izy ireo mba hananana fifandraisana salama sy salama mandritra ny fotoana maharitra. Izany dia mitarika ho amin'ny fahatsapana ho manirery, ny tebiteby ara-tsosialy ary ny fahaketrahana amin'ny fitomboan'ny isa.
Ny ankamaroan'ny tanora tamin'ny fotoana voalohany nijerena sary vetaveta dia tsy nahy, miaraka amin'ny 60% -n'ny ankizy 11-13 izay nahita pôrnôgrafia nilaza fa tsy fanahy iniana ny fijerena sary vetaveta raha ny vao haingana fikarohana. Ny ankizy dia nilazalaza ny fahatsapana ho "tototry ny vola" sy "misavoritaka". Nihatra manokana izany rehefa nahita sary vetaveta izy ireo latsaky ny 10 taona.
Mety ho gaga ho an'ny ray aman-dreny maro izany. Raha te hianatra bebe kokoa ianao dia jereo ny anay Torolàlana ho an'ny ray aman-dreny amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet . Izy io dia mikendry ny hanampy amin'ny fampitaovana ireo ray aman-dreny sy mpikarakara ho an'ireo resadresaka sarotra amin'ireo zanakao ireo ary handrindra ny fanampiana amin'ny sekoly raha ilaina izany. Kent police mampitandrina fa ny ray aman-dreny dia mety henjehina noho ny 'sexting' an-janany raha toa ka tompon'andraikitra amin'ny fifanarahana finday izy ireo. Jereo ny pejinay momba sexting sy ny lalàna any Ekosy Ary ho an'ny sexting ao Angletera, Wales ary Irlandy Avaratra.
Vao avy nandefa andiana GRATISA izahay lesona planina ho an'ireo mpampianatra izay hiatrika ny "Fampidirana ny Sexting"; "Sexting sy ny atidohan'ny adolantsento"; "Sexting, the Law and You"; "Fitsapana sary vetaveta amin'ny fitsapana"; "Fitiavana, firaisana ara-nofo & pôrnôgrafia"; "Bokin'ny pôrnôgrafia sy ny fahasalamana ara-tsaina", ary ny "andrana amin'ny pôrnôgrafia lehibe". Izy ireo dia ahitana fampihetseham-batana mampanan-karena, mahafinaritra ary mifanerasera isan-karazany izay manome toerana azo antoka hiresahan'ny mpianatra ireo olana lehibe rehetra ireo. Tsy misy tsiny sy henatra, ny zava-misy fotsiny, mba hahafahan'ny olona manao safidy tsara.
Ny lesona amin'izao fotoana izao dia mety ihany koa ho an'ny sekoly miorina amin'ny finoana. Tsy aseho sary vetaveta. Izay fiteny mety mifanohitra amin'ny fotopampianarana dia azo ovaina.
Reward Foundation manara-maso ny fikarohana
Ny Reward Foundation dia manara-maso fikarohana vaovao isan'andro ary mampiditra fivoarana amin'ny fitaovantsika. Mamokatra ihany koa ny fikarohana ataontsika manokana hevitra ny fikarohana farany mba hahafahan'ny hafa manohy manavao ny zava-misy amin'ny fivoarana vaovao.
Misy izao enina fianarana izay mampiseho a fifandraisana azo avy amin'ny fampiasana sary vetaveta sy ny loza avy amin'ny fampiasana izany.
Ao amin'ny The Reward Foundation dia mitatitra izahay tantara avy amin'ny lehilahy sy vehivavy an'arivony izay nanana olana tamin'ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet. Ity fikarohana tsy ara-potoana ity dia manan-danja amin'ny fiheverana ny fironana ankehitriny izay afaka maharitra ela kokoa mba ho hita taratra amin'ny fikarohana akademika ofisialy. Betsaka ny nanandrana nandao ny pôrnôgrafia ary niaina tombontsoa ara-tsaina sy ara-batana vokatr'izany. jereo io zatovolahy iotantara.
“Fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia”
Orinasa pôrnôgrafia no lohalaharana amin'ny fampiroboroboana ny Internet sy ny famolavolana azy. Ny fanindrahindrana tafahoatra ataon'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia mahatonga ny ati-doha hamokatra faniriana mahery vaika kokoa. Ireo faniriana ireo dia mitaona ny eritreritra sy ny fitondran-tenan'ny mpampiasa pôrnôgrafia rehefa mandeha ny fotoana. Ho an'ny mpampiasa mihamaro izay mety hitarika azy io fanakorontanana. Ity aretina ity izay vao novokarin'ny fanitsiana iraika ambin'ny folo an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana manasokajy ny aretina (ICD-11) dia misy pôrnôgrafia manery sy fampiasana filokana. Tsy azo fehezina ny pôrnôgrafia sy ny filokana, azo sokajiana ho toy ny aretina mampiankin-doha raha tsy voafaritra amin'ny alàlan'ny ICD-11.
Araka ny fikarohana farany, maherin'ny 80% ny olona mitady fanampiana ara-pahasalamana amin'ny tatitra momba ny fitondran-tena maharikoriko dia manana olana mifandraika amin'ny pôrnôgrafia. Jereo ity tsara TEDx talk (9 min) hatramin'ny volana Janoary 2020 avy amin'ny mpikaroka momba ny neurologista ao amin'ny University of Cambridge, Casper Schmidt, hianatra momba ny "aretina miteraka firaisana ara-nofo maharikoriko".
Ny pôrnôgrafia amin'izao fotoana izao dia 'tanjaka indostrialy' amin'ny habetsaky ny fatrany misy sy ny haavon'ny fanentanana, raha oharina amin'ny pôrnôgrafia na 10 na 15 taona lasa aza. Safidy manokana ny fampiasana azy, tsy izahay handrara ny pôrnôgrafia ara-dalàna ho an'ny olon-dehibe, fa ny ankizy kosa tsy maintsy arovana. Ny filokana tafahoatra ateraky ny sary vetaveta dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana ara-tsaina sy ara-batana ho an'ny sasany. Tianay ny manampy ny mpampiasa hanana toerana afaka misafidy safidy 'mifototra amin'ny porofo tsara indrindra avy amin'ny fikarohana misy sy ny safidy fanarenana signpost, raha ilaina izany. vonjimaika ny fanafoanana ny filokana, na ny fampihenana matetika, dia ny fahasitranana amin'ny fiankinan-doha, ny filan'ny nofo amin'ny fitaovana mafy sy ny olana ara-pananahana nateraky ny pôrnôgrafia - tsy misy hafa. Ny Reward Foundation dia tsy miaro ny tsy fifadian-kanina ho fomba fiaina maharitra.
Manao fampielezan-kevitra izahay mba hampihenana ny fidiran'ny ankizy amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet. Ampolony fikarohana Ny taratasy dia manondro fa manimba ny ankizy amin'ny dingana marefo amin'ny fampandrosoana ny ati-doha. Nisy fiakarana goavana teo amin'ny fanararaotana ara-nofo nataon'ny zaza tamin'ny zaza tao anatin'ny 8 taona lasa ary tamin'ny ratra ara-pananahana nateraky ny pôrnôgrafia hoy ny mpitsabo nanatrika ny atrikasa nisy anay ary mety maty. Misy ifandraisany amin'ny herisetra an-tokantrano, ataon'ny lehilahy manohitra vehivavy indrindra.
Manohana ny hetahetan'ny governemanta UK izahay amin'ny fampiharana ny fanamarinana taona mahomby ho an'ireo tranonkala vetaveta ara-barotra sy tranokala media sosialy mba tsy ho tafintohina mora foana amin'izany ny ankizy. Tsy hisolo ny filàna fanabeazana momba ny risika izany. Ary iza no mahazo tombony raha tsy manao na inona na inona isika? Ny indostrian'ny pôrnôgrafia mitentina miliara dolara. Mikasa ny hiatrika ny pôrnôgrafia azo amin'ny alàlan'ny media sosialy ny governemanta UK ao anatin'ilay volavola Tranonkala fotsy hoditra. Tsy dia ho lalàna mihitsy raha tsy amin'ny taona 2024 tany am-boalohany.
Ny fampahalalana an'ity tranokala ity dia afaka manampy ny olona hanatsara ny fahafahany mankafy firaisana ara-nofo sy mahomby. Izahay dia manomana fizarana vaovao ho an'ny tranokala amin'ny tapany faharoa amin'ny 2020. Raha tianao ny misy lohahevitra mifandraika ampiana, azafady mba fantaro izahay amin'ny alàlan'ny hifandraisana aminay amin'ny info@rewardfoundation.org.
Ny valisoa Goavana Tsy manome fitsaboana na toro-hevitra ara-dalàna. Na izany aza, manao lalan-tokana izahay ho fanarenana ny olona izay nanjary olana ny fampiasana azy. Ny tanjonay dia ny hanampy ireo olon-dehibe sy ny matihanina hiditra amin'ny porofo sy fanohanana mba hahafahan'izy ireo mandray fepetra mifanaraka amin'izany.
Maimaimpoana ny pôrnôgrafia amin'ny Internet, fa ny ankizy kosa mandoa ny vidiny
© 2021 NY FIVAVAHANA RAVALOMANANA: VOAJANGAN'NY VAVAKA rehetra
The Reward Foundation, 15 Calton Road, Edinburgh, EH8 8DL: Fikambanana Scottish Charities Incorporated SC044948